Siria:Vaovao mipoapoaka momba ny niokleary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2008 15:44 GMT
Ny tantara dia nanomboka tamin’ilay fanafihana an’habakabaka tsy fantatra antony nataon’i Israely tany avaratr’i Siria tamin’ny Septambra 2007. Taorian’izay dia nandeha be ny resaka momba ny mety ho fisian’ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny niokleary eo amin’i Siria sy Korea avaratra. Nefa na Israely na ry zareo any USA dia samy nitana ho tsiambaratelom-panjakana ny anton’ilay fanafihana hatramin’ny omaly.
Tsy nampandry saina ireo mpitoraka blaogy siriana ny votoatin’ilay vaovao, saiky ny rehetra mihitsy no nahatsiaro ny fomba nataon’i Collin Powell ho fampahafantarana ny ONU momba ireo WMD nolazaina fa nisy tao Iraka nefa tsy hita velively hatramin’izao.
Sasa avy amin’ny The Syria News Wire, dia miezaka mametraka ireo fiampangana ho ao anatin’ny tontolo iraisam-pirenena nipoirany ary manontany tena ny amin’ny antony niandrasan’izy ireo fotoana lava be toy izao vao namoaka izany vaovao ‘tena lehibe’ izany.
Ary farany, hijanona ao Ihsan isika, izay tsy mandry saina velively ny amin’ireo hoe zava-marim-pototra ao ambadik’ireo endrikendrika ireo, nefa miseho ihany koa ny olana hafa: Inona no tena tanjon’ity fanorenana ity, toa miatrika famadihana avo lenta isika. “Misy olona ambony ao Damaskosy ve tafiditra amin’izy ity sa tsia?” hoy ny fanontaniany.